PCS အားပြန်သွင်းခြင်း- အလုပ်လုပ်သောနည်းလမ်းများ
PCS MasterCard သည် ပြန်လည်စတင်နိုင်သော ကြိုတင်ငွေပေးကတ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းကြောင့်၊ ၎င်းသည် မည်သည့်ဘဏ်အကောင့်အမျိုးအစားနှင့်မျှ ချိတ်ဆက်ခြင်းမရှိသည့်အပြင် စာရွက်စာတမ်းအမျိုးအစား သို့မဟုတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းမရှိဘဲ ရောင်းချသည့်နေရာများတွင် ရယူထားသောကြောင့် စုစုပေါင်းလုံခြုံရေးနှင့် လျှို့ဝှက်ရေးဖြင့် ဝယ်ယူမှုအမျိုးအစားအားလုံးကို သင်ပြုလုပ်နိုင်သောကြောင့် ၎င်းနှင့်သာ သက်ဆိုင်ပါသည်။ သင့်မိုဘိုင်းဖုန်း။ ကြိုတင်ငွေပေးချေသည့် မိုဘိုင်းတယ်လီဖုန်းနှင့် ဆင်တူသော ဝယ်ယူမှုနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဤနည်းကဲ့သို့ပင် သင်သည် အဆိုပါသို့ ဆက်လက်သွားရမည်ဖြစ်သည်။ PCS အားပြန်ဖြည့်ပါ။ သင်၏လက်ကျန်ငွေကုန်သွားသောအခါ။
သင့်တွင် PCS MasterCard မရှိသေးပါက၊ ၎င်းသည် ဘဏ်အကောင့်မရှိသူများအတွက် အွန်လိုင်းမှ ဝယ်ယူမှုများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသောကတ်ဖြစ်ကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်။ ဆယ်ကျော်သက်ယုံကြည်မှုပိုရှိ၍ နိုင်ငံခြားခရီးများ ၊ ဤဝန်ဆောင်မှုသည် CreaCard SA ကုမ္ပဏီ၏ ကျေးဇူးကြောင့် 2010 ခုနှစ်တွင် ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး စပိန်ကဲ့သို့သော အခြားနိုင်ငံများသို့ တဖြည်းဖြည်း ပျံ့နှံ့သွားခဲ့သည်။
CreaCard SA သည် ၎င်း၏အမှတ်တံဆိပ်အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ယူရို ၃ သန်းကျော် စုဆောင်းနိုင်ခဲ့သည်။ ကြိုတင်ငွေပေးချေခြင်း ဝန်ဆောင်မှုများ (PCS) ယခုလည်း ၎င်းသည် ဝယ်ယူမှု၊ ငွေပို့မှု၊ ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ယူမှု၊ အွန်လိုင်းငွေပေးချေမှုစသည့်များအတွက် ကြိုတင်ငွေပေးကတ်များအတွက် ဤစျေးကွက်တွင် ဦးဆောင်သူတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းကို Prepadi365 Card Awards တွင် 2013 ခုနှစ်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲ ပြုလုပ်ခဲ့သော "အကောင်းဆုံး နိုင်ငံတကာ ကြိုတင်ငွေပေးကတ်" ဆုကိုပင် ချီးမြှင့်ခံခဲ့ရသည်။ အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့် ဖြစ်မည်...
ကောင်းပြီ၊ မင်းတစ်ခုလိုချင်ရင် ဒါမှမဟုတ် မင်းမှာတစ်ခုရှိပြီးသားဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ သိထားဖို့လိုတယ်ဆိုရင် ဒီသင်ခန်းစာမှာ သင်တွေ့မြင်ရလိမ့်မယ်။ လိုက်နာရန်ခြေလှမ်းများ PCS အား အဆင့်ဆင့် အားပြန်သွင်းနည်းကို သိရန်။
ကတ်၏ PCS အားပြန်သွင်းခြင်းအား အဆင့်ဆင့်ရှင်းပြခြင်းမပြုမီ၊ အနည်းငယ်ပိုသိရန် စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပေလိမ့်မည်။ ဒီကတ်ကို ဘယ်လိုရနိုင်မလဲ ဒါမှမဟုတ် ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲ။. ပေါ်လွင်ချက်များမှာ-
PCS ကတ်ကို ရယူပါ။: ထောင်ပေါင်းများစွာထဲက တစ်ခုခုကို ရယူနိုင်ပါတယ်။ ဆိုင်များတွင် တစ်ပြည်လုံးသို့ ပြန့်ကျဲနေသည်။ ၎င်းကိုအွန်လိုင်းမှဝယ်ပါ။.
စြေး- ပုံမှန်ဗားရှင်းအတွက် € 9,90 ဖြင့် ဝယ်ယူနိုင်သည် သို့မဟုတ် PREMIUM ရွေးချယ်မှုအတွက် + €5ပေးချေနိုင်ပြီး ပိုမိုဇိမ်ခံသောလူနေမှုပုံစံရှိသူများအတွက် တစ်နေ့လျှင် ငွေပိုမိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်။
ကတ်အရေအတွက်: ဆက်စပ်မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းတစ်ခုလျှင် PCS ကတ်4ခုအထိ ရနိုင်သည်။
လက်ကျန်ကန့်သတ်ချက်- ကတ်တစ်ခုတွင် တစ်ရက်လျှင် ငွေဖြည့်ကူပွန်3ခု ကန့်သတ်ချက်ရှိပြီး တစ်ရက်လျှင် အားပြန်သွင်းရန် အများဆုံး လက်ကျန်မှာ ယူရို 500 ဖြစ်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ PREMIUM သည် သင့်အား တစ်နေ့လျှင် € 4500 အားပြန်သွင်းရန်ခွင့်ပြုသည်။
မင်းရဲ့ PCS ကတ်ရပြီဆိုရင် အဲဒါကို သုံးလို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို activate လုပ်ရမယ်။ ထိုသို့လုပ်ဆောင်ရန်၊ စာလုံးကြီးဖြင့် PIN စာလုံးဖြင့် သင့်နိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုသို့ SMS ပေးပို့ခြင်းကဲ့သို့ ရိုးရှင်းပါသည်။ ဂဏန်း ၈ လုံး. စက္ကန့်အနည်းငယ်ကြာသည်နှင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား SMS ဖြင့် ပြုပြင်၍မရသော ပင်နံပါတ်တစ်ခု ပေးပို့ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းကို စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီး အသုံးပြုရန် အသင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်သောကြောင့် စတင်အသုံးပြုနိုင်ပြီဖြစ်သည်။
ယင်းကြောင်းပြန်ပြောပြသည် PIN သည် လျှို့ဝှက်ကုဒ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် သင့်အား ATM စက်များတွင် ငွေထုတ်ယူရန် သို့မဟုတ် ဝယ်ယူမှုများကို ခွင့်ပြုသည်။ ထို့ကြောင့် ပိုင်ရှင်ကိုသာ သိသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကတ်များ၏ လက်ကျန်ကို စစ်ဆေးပါ။
Mastercard PCS ကတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သင့်မိုဘိုင်းဖုန်းမှ လက်ကျန်ငွေကို အလွယ်တကူ စစ်ဆေးနိုင်သည်၊ စကားလုံးဖြင့် မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။ လက်ကျန် သင့်ကတ်နံပါတ်၏ နောက်ဆုံး ဂဏန်းလေးလုံးဖြင့် နောက်တွင် ကျန်လက်ကျန်ငွေနှင့်အတူ SMS ကို လက်ခံရရှိမည်ဖြစ်သည်။
အဆင့်ဆင့် PCS အားပြန်သွင်းပါ။
နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ် PCS အားပြန်ဖြည့်ပါ။. ၎င်းတို့ထဲမှ တစ်ခုကို ဝဘ်ပေါ်ရှိ မတူညီသော ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းများမှလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ recharge.comသို့မဟုတ် Android နှင့် iOS မိုဘိုင်းစက်ပစ္စည်းများအတွက် ၎င်း၏တရားဝင်အက်ပ်မှနေ၍ မည်သည့်နည်းဖြင့်မဆို အနည်းဆုံး ယူရို 20 မှ € 200 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပို၍ အားပြန်သွင်းရန်အတွက် ပမာဏများစွာရှိကြောင်း သင်သိထားသင့်သည်။
မင်းရဲ့လက်ထဲမှာလည်းရှိတယ်။ MyPCS မိုဘိုင်းအက်ပ် Android စက်ပစ္စည်းများအတွက် Google Play နှင့် iOS အတွက် App Store တို့မှ အခမဲ့ဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်ပါသည်။ ၎င်းမှ သင်လုပ်ဆောင်မှုများစွာကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်-
လက်ကျန်ငွေကို စစ်ဆေးပြီး အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ပါ။
အားပြန်သွင်းကူပွန် သို့မဟုတ် သင့်ဘဏ်ကတ်မှ PCS အား ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းပါ။
မျှဝေရန် သင်၏ RIB / IBAN ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
လွှဲပြောင်းပေးပို့ခြင်း သို့မဟုတ် လက်ခံခြင်း။
PCS ကတ်တစ်ခုမှ အခြား PCS သို့ ငွေလွှဲပါ။
သင်အလိုရှိတိုင်း ကတ်ကို လော့ခ်ချပြီး လော့ခ်ဖွင့်ပါ။
PCS အားပြန်သွင်းရန်အတွက်၊ အဆင့်များ သူတို့ဟာနေသောခေါင်းစဉ်:
အက်ပ်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပြီး ထည့်သွင်းပြီးသည်နှင့် PCS ကတ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် သင့်မိုဘိုင်းတွင် ၎င်းကို ဖွင့်နိုင်သည်။
သူတောင်းတဲ့ အချက်အလက်တွေနဲ့ သင့်ကိုယ်သင် ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။
မီနူးကိုသင်ဝင်ရောက်ပြီးသည်နှင့်၊ သင်သည်အားပြန်သွင်းရန်ရွေးချယ်မှုကိုတွေ့လိမ့်မည်။ ၎င်းတွင်၊ ပြန်လည်ဖြည့်သွင်းသည့်ပမာဏ၊ ကူပွန် သို့မဟုတ် သင့်ဘဏ်အကောင့်၏ဒေတာကို ထည့်သွင်းခြင်းကဲ့သို့သော သင့်အားပြသသည့်အဆင့်များကို လိုက်နာရန် လိုအပ်ပြီး ဒါပင်ဖြစ်ပါသည်။
ချက်ခြင်းသင်နိုင်ပါတယ်။ စောင့်စရာမလိုဘဲ လက်ကျန်ငွေကို အသုံးပြုပါ။Error မဖြစ်ပေါ်သေးသရွေ့။ သင်သည် အဆင့်များကို မှန်ကန်စွာ လိုက်နာကြောင်း စစ်ဆေးပါ၊ အဖြစ်များဆုံး အမှားများသည် တောင်းဆိုထားသည့်အတိုင်း မက်ဆေ့ချ်များ မပို့ခြင်း သို့မဟုတ် ဂဏန်းမှားရိုက်ထည့်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ဖုန်းငွေဖြည့်ပါ » ဘဏ်များ » PCS အားပြန်ဖြည့်ပါ။